CLear Linux: iyo GNU Linux yeIntel Architecture kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Bvisa Linux: iyo distro yeIntel dhizaini
Bvisa Linux chirongwa cheIntel kuvaka GNU / Linux kugovera kweakasiyana mafomu ekushandisa. Chinangwa cheKuchenesa Linux OS ndechekuratidzira zvakanakisa zveIntel Architecture, kubva kune yakaderera-nhanho kernel maficha kune ekushandisa mashandisirwo, kugadzirisa zvese zvigadzirwa zvekambani.
Izvo zvaive zvisina kuitirwa kuumba nyowani yakajairika chinangwa kugovera, asi nekuda kwezvinangwa chaizvo zvegore komputa neiyi inokurumidza uye yakagadziridzwa distro pachinzvimbo cheyakaomarara uye inorema. Nepo yakawanda OpenStack Foundation software yakaverengerwa, hapana graphical interface kana yekutsikisa kudhinda yakaverengerwa, izvo zvisina kukosha mugore.
Iyo Intel Software chikamu chaidawo isa simba mumidziyo, inobatsira gore uye neramangwana rakawandisa mukuona. Basa rakaoma riri kuitwa kusimudzira chengetedzo uye kusangana kwayo neIntel VT-x virtualization tekinoroji iyo inosanganisirwa mumakambani macroprocessors.
Kana iwe uchida mamwe mashoko, iwe unogona kuwana iyo yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti clearlinux.org, kwaunogona zvakare kurodhaunira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Bvisa Linux: iyo distro yeIntel dhizaini
Emulator yekumhanyisa x86 kunyorera pane Raspberry Pi (ARM)
Peppermint 6, inowedzera minty distro